दोहाको मञ्चमा इद र जनैपूर्णिमा | We Nepali
२०७६ साउन २९ गते २२:४०
दोहा (कतार), साउन २८ । दोहाको आकाशमा जसै बाह्रौ दिनको चन्द्रमा देखियो, मञ्चको चम्किलो विशाल पर्दामा घडीको दृश्यसहित नेपथ्य प्रस्तुतीको संकेत सुरु भयो ।
कन्सर्ट त्यसपछि फेरि ‘चरि मरयो’, ‘जोमसोमे बजारमा’, ‘जोगले हुन्छ भेट’, ‘हामी नेपाली’, ‘यो जिन्दगानी’ हुँदै अघि बढेको थियो । त्यसपछि पूर्वी नेपालको पदयात्राका क्रममा संकलन गरिएको हाक्पारेमा आधारित ‘कोशीको पानी’ हुँदै ‘रेशम’ सम्म पुगेपछि देशप्रेमका गीतहरुको क्रम सुरुभएको थियो । ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ ‘हिमाल चुचुरे’, ‘मै नाचेँ छमछमी’, ‘तालको पानी’ हुँदै अन्तिममा ‘रातो र चन्द्रसूर्जे’मा पुगेर कार्यक्रम टुंगिएको थियो ।
कतारमा कन्सर्टको आयोजक मध्ये को ‘लेभल एफ.एन. एडभर्टाइजिङ एण्ड इभेन्ट’ का लक्ष्मणप्रसाद चौलागाईले भने “नेपथ्यको उपस्थितिले हामी कतारबासी नेपालीलाइ एकजुट हुने मौका दिलायो । कार्यक्रमको सफलताले हामी सम्पूर्ण आयोजक तथा नेपथ्य प्रेमी दर्शकमा उर्जा थपिदिएको छ ।”
दोहाको यो कार्यक्रमलाई लेभल एफ.एन. एडभर्टाइजिङले, कास्की आदर्श सेवा समाज र राम नगर ठिमुरा समाजको सहआयोजनमा सम्पन्न गरेका हुन् ।